सुजुकी डिजायर अब नयाँ प्रिमियम अवतारमा, कति पर्छ मूल्य ? Bizshala -
सुजुकी डिजायर अब नयाँ प्रिमियम अवतारमा, कति पर्छ मूल्य ?
काठमाण्डौ । नेपालका लागि सुजुकी कारको आधिकारिक बिक्रेता तथा सीजी होल्डिंग्सको अटोमोटिभ डिभिजन सीजी मोटोकर्पले नेपालकै बेस्ट सेलिङ सेडान डिजायरको नयाँ अवतार सार्वजनिक गरेको छ। २०२१ डिजायरमा नयाँ बम्पर र ग्रिल डिजाइनसहितको बोल्ड र स्टाइलिस फ्रन्ट फेसिया र आधुनिक वुड फिनिस इन्टेरियर रहेको छ।
‘हामीले सुजुकी डिजायरको पहिलो पुस्ता एक दशकअघि नेपाली बजारमा ल्याएका थियौं। बेस्ट इन क्लास फिचर र कम्फर्टले गर्दा नेपालमा यो सबैभन्दा बढी मन पराइएको कार बन्न सफल भएको छ’, सीजी मोटोकर्पका कार्यकारी निर्देशक करण चौधरीले भने, ‘२०२१ डिजायरमा सेग्मेन्टमै पहिलो पटक आइडल स्टार्ट–स्टप टेक्नोलोजी (आईएसएस) भएको नेक्स्ट जेन के सिरिज इन्जिन, नयाँ इन्टेरियर र एड्भान्स्ड फिचर राखिएको छ। स्टार्ट–स्टप फंक्सनसहितको के सिरिज डुअल जे, डुअल भीभीटी बीएस६ पेट्रोल इन्जिनले नयाँ डिजायरलाई कम उत्सर्जन र उच्च माइलेजसहितको डिजायरेबल कार बनाएको छ।’
‘नेपाली ग्राहकले खोजेजस्तो स्टेट अफ आर्ट डिजाइन र अत्याधुनिक प्रविधि भएकोले हामीलाई विश्वास छ नयाँ डिजायरबाट ग्राहक हरेक हिसाबले सन्तुष्ट हुनुहुनेछ,’ चौधरीले भने।
२०२१ डिजायरमा आईएसएस फंक्सनसहितको नेक्स्ट जेन के सिरिज डुअल जेट, डुअल भीभीटी बीएस६ इन्जिन राखिएको छ। उच्च कम्प्रेसन रेसियो, कुल्ड ईजीआर सिस्टम र पिस्टन कुलिङ जेट भएको नयाँ इन्जिन पहिलेको भन्दा परिस्कृत छ। जसले इन्जिनको कार्यक्षमता बढाउनुका साथै घर्षणलाई कम गर्छ। यसले गर्दा म्यानुअल ट्रान्समिसनमा यसको माइलेज २३.२६ किलोमिटर प्रतिलिटर रहेको छ। यो इन्जिनले ६००० आरपीएममा अधिकतम ६६ किलोवाट पावर उत्पन्न गर्छ।
२०२१ डिजायरमा ट्विन पड मिटर क्लस्टर र नयाँ १०.६७ सेन्टिमिटरको मल्टि इन्फर्मेसन टीएफटी डिस्प्ले प्रयोग गरिएको छ। यसमा प्रयोग भएको मोर्डन वुडन फिनिसले कारको डोर र इन्स्ट्रयुमेन्ट प्यानललाई नेचुरल ग्लस फिनिस दिएको छ। नयाँ डुअल टोन सिटले क्याबिनको आकर्षणलाई बढाएको छ।
१७.७८ सेन्टिमिटरको स्मार्टप्ले स्टुडियो टच इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टमलेगज्जबको ड्राइभिङ एक्सपिरियन्स दिलाउँछ।
नयाँ डिजायरमामा पर्याप्त स्पेस र उत्कृट सुरक्षा व्यवस्था रहेको छ। एजीएस भेरिएन्टमा इलेक्ट्रोनिक स्ट्याबिलिटी प्रोग्राम र हिल होल्ड फंक्सन रहेकोे छ। जसले गाडीबाट चिप्लनबाट बचाउनुका साथै उकालोमा रोकिनुपरेको अवस्थामा सहज रुपमा गाडीलाई पिक लिन मद्दत गर्छ। यसमा फ्रन्ट र रियर दुवै ब्रेक ठूलो आकारको रहेको छ। जसले गर्दा बे्रकिङ सजिलो बनाउनुका साथै ब्रेकको आयु पनि बढाउँछ। साथै, नयाँ डिजायरको सबै भेरियन्टमा डुअल एअर ब्याग, प्रिटेन्सनर फोर्स लिमिटर सिट बेल्ड, चाइल्ड सिट रिस्टे«न सिस्टम र ईबीडीसहितको एबीएस रहेको छ।
हार्टटेक्ट प्ल्याटफर्मको पाँचौँ पुस्तामा तयार गरिएको नयाँ २०२१ डिजायर फ्रन्टर अफसेट, साइड इम्प्याक्ट र पेडेस्ट्रिय रेगुलेसनमा आधारित छ।
१. आइडल स्टार्ट–स्टप फंक्सनसहितको एड्भान्स्ड के सिरिज डुअल जेट डुअल भीभीटी बीएस६ पेट्रोल इन्जिन। जसले उत्सर्जन कम गर्नुका साथै माइलेज बढाउँछ।
५. १०.६७ सेन्टिमिटरको मल्टी इन्फर्मेसन डिस्प्ले
६. एलईडी प्रोजेक्टर हेडल्याम्प र डे टाइम रनिङ लाइट
७. पुस स्टार्ट स्टप बटनसहितको स्मार्ट किलेस इन्ट्री
९. ३७८ लिटरको ठूलो बुट स्पेस१०. १५ इन्चको एलो ह्विल
डिजायर भीएक्सआई – ३४ लाख २९ हजार रुपैयाँ
डिजायर जेड्एक्सआई – ३७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ